उभिएर पानी पिउने गर्नुभएको छ ? सावधान ! लाग्नसक्छ यस्ता रोग – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/उभिएर पानी पिउने गर्नुभएको छ ? सावधान ! लाग्नसक्छ यस्ता रोग
उभिएको बेलामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अझ कोही त उभिएर सासै रोकेर पानी पिउँछन् । यो कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।स्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार बसेर सानो-सानो चुस्की लिँदै पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी पानी पिउँदा शरीरले पानी छान्न पाउँदैन र फोहोरहरू मूत्राशय, मृगौला र रगतमा जम्न पुग्छन् । यसले मृगौला बिगार्छ र मूत्रनली पनि खराब बनाउँछ।
उभिएर पानी पिउँदा पेटको अन्नप्रणालीको तल्लो भागमा पानी छचल्किन्छ । यसले अन्नप्रणाली र पेटबीचको जोर्नी (स्फिङ्क्टर) फुल्छ । यसरी स्फिङ्क्टर फुल्दा पेटका अम्ल (एसिड) उल्टो बग्न थाल्छन् र अन्नप्रणालीलाई जलन हुन्छ । यसले अल्सर गराउँछ । यसरी उभिएर पानी पिउँदा पाचनप्रणाली ध्वस्त हुन्छ ।बसेर बिस्तारै चुस्की लिँदै पानी पिउनु नै उत्तम उपाय हो ।
यो रक्त समूह हुनेहरुलाई को’रोना सं’क्रमणको ख’तरा उच्च, ५० % बढीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्नसक्ने !